Ndingasebenzisa njani i-backlinks yokuncintisana ukuze ndincede?
Kakade, i-giant search giant isoloko isitshela ukuba iziqulatho zayo eziphambili zijolise ngokukodwa kumxholo ophezulu okhupha ixabiso langempela kumsebenzisi. Akungathandabuzeki, umxholo usenkosi. Nangona kunjalo, iprofayili ye-organic link yewebsite ihlala yinto yesibini ebaluleke kakhulu kwiGoogle. Yingakho kungekho sidingo sokuthi i-backlinks esemgangathweni iphakathi kweengxenye eziphambili zengcamango ye-Modern Engine. Ndithetha ukuziphatha kakubi ngeprofayili yakho ye-backlink ayikwazi nje ukuphumelela ukuhambisa nayiphi na inzuzo engalinganiswayo kodwa inokulimaza yakho inkqubela phambili. Ngaphezu koko, ukuba i-Google ikhankanya iwebhusayithi yakho okanye iblogi ekukhohliseni, iyakwazi ukugqithisa xa zonke izinto ziphela ngokugqithisa ukuphuma kwimiphumo yokukhangela kanye naphakade (ngaphandle koko, ukuvinjelwa ngokusisigxina ekufuneni). Yingakho uhlalutya i-backlinks-mpikiswano - kunye neenzuzo zabo ezithembisayo kunye neendlela ezimbi kakhulu - ngaba isisombululo esilungileyo oza kufuneka sisebenzise isicwangciso soqhagamshelwano esinokukhusela ngokukhuselekileyo.Kwaye ndiya kukubonisa indlela yokuhlalutya i-backlinks yakho. Ngoko, ngezantsi kunamanyathelo amathathu alula ukuqhuba uphando olululo kwaye wenze uninzi lwabathengi bakho.
Ukuchonga abaphikisi bakho be-Niche
Ngaphambi kokuba uphando malunga nayiphi na i-backlinks yomncintiswano, kuya kufuneka uchonge iiwebhsayithi eziphambili kakhulu ezichasene nabadlali abasemagqabini, okanye ummandla wakho oyintloko woshishino. Kwaye lo msebenzi ulawulwa kakhulu, ongacinga. Kwaye mna, ndandisoloko ndisebenza ngokuzenzekelayo kwaye ndaphonononga iimpumelelo kunye nokungaphumeleli kwamabambisene am ngaphambi kwangaphambili. Ngokufanelekileyo, ukuchonga iimarhwebo zakho kufuneka kwenziwe kwithuba elide ngaphambi kokuba iwebhusayithi yakho okanye iblogi iphile. Nangona kunjalo, ngoku ixesha eliphakamileyo uqhuba ngokuhlalutya ngokubanzi ukukhuphisana nokusebenzisa i-backlinks engcono kunakho. Awazi ukuba ungaphi? Ndiyincoma ukusebenzisa iSerpstat, ithuluzi le-intanethi elingasimahla elincede kakhulu ngokuqonda abadlali bam. Ukukubeka kwisiNgesi esilula, ungasebenzisa esi sixhobo ukufumana iiwebhsayithi zabadlali bakho abaphumelele. Ukuqwalasela inani lamagama abalulekileyo, ubungakanani obukhulu besayithi, kunye nenyaniso yokuba ihamba kakuhle, uya kuqonda ukuba uza kuqala.
Yazi iinjongo zakho eziphambili
Ngokuqhelekileyo, i-PA (igunya lephepha), i-DA (igunya lesizinda), kunye ne-PR (kwiphepha lekhasi). Kubonakala ukuba injongo yakho kukuba ngamanqaku aphezulu angoku kwezi mitriki. Ngaloo ndlela, kufuneka ukwazi kwakhona le nkcukacha elandelayo - inani le-backlinks yakho kumncintiswano (kwiphepha elibhekiseleleyo kunye nemimandla), kunye nomfanekiso omkhulu weetekisi zengqungquthela ezilungiselelwe i-SEO (inani labo, ukusabalalisa, kunye nokungafani kwamagama angundoqo, ukufaka uphawu , kunye nezinye izakhiwo ezibucayi).
Hlaziya i-Backlinks yakho
Kakade, akukho fomula yendalo yonke. Nangona kunjalo, ukusebenzisa izixhobo zokuhlalutya ukuze ufumane ukuqonda ngokujulileyo kwe-backlinks yakho yokhuphiswano mhlawumbi yindlela efanelekileyo yokuphuma kumncintiswano weemarike. Ngoko ke, uya kufuneka uhlalutyo lokukhuphisana kwiwebhusayithi nganye kunye neprofayili efanelekileyo ifumaneka kwi-top of the search. Ngale ndlela, ndincoma ukuzama enye yezixhobo zokuhlalutya emva kwe-backlink - i-Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer, i-Screaming Frog, okanye i-Ahrefs-ndazama bonke. Kodwa mna, nangona kunjalo, isethi esona sikhulu semisebenzi yaso iyafana, nangona kukho izixhobo ezinamathelwano kunye nezihlungi eziphambili ezibonelelwe ngu-Analyzer (Semalt) kunye ne-Open Site Explorer (Moz). Ngoko, kukuphela kwakho ukugqiba ukuba ngubani oya kuzama kuqala. Emva kokuba uthathe ingqiqo efanelekileyo, konke okufunekayo kukuphinda uphinde ulandele amanqaku aphezulu aphikisana nabo, okanye ubuncinane ufumane ukuqonda okupheleleyo kwinkqubo yokwakha ikhonkco kwi-niche yakho Source .